Baolina kitra CAN 2019 :: Nahazo vola 700 tapitrisa ariary avy amin’ny Filoham-pirenena ny Barea • AoRaha
Baolina kitra CAN 2019 Nahazo vola 700 tapitrisa ariary avy amin’ny Filoham-pirenena ny Barea
Nigadona teto an-toerana ny ekipam-pirenena malagasy eo amin’ny taranja baolina kitra na Barea, ny alahady maraina lasa teo. Nitso-drano azy ireo ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina sady nanome vola 700 tapitrisa ariary teny amin’ny kianjan’Andralanitra afak’omaly. “Mitso-drano azy ireo aho hitondra fandresena “, hoy ny Filoha.
Tsy mbola mahakivy ireo vokatra roa manalasala tamin’ny fiomanan-tena mialoha ny fifaninanana any Ejipta: ady sahala 3 sy 3 nanoloana an’i Luxembourg sy ny faharesena 0 noho 1 teo anatrehan’ny Keniana, vao tamin’ny zoma lasa teo.
Mitohy hatrany ny fiomanan’ny Barea. Niatrika fanazaran-tena teny amin’ny kianja Elgeco Plus eny By Pass ihany koa ny ekipam-pirenena omaly maraina rehefa avy teny amin’ny kianja Andralanitra. Niakatra ny kianjaben’i Mahamasina ireo mpilalao, taorian’izay. “Manome toky izahay fa hanao izay tratry ny herinay amin’io CAN io. Hampiseho ihany koa ny maha Malagasy”, araka ny voalazan’Andriatsima Ima Faneva, kapitenin’ny Barea.
Manohana an’io fanomanana io ihany koa ny masoivoho Koreanina. Nanolotra baolina miisa roapolo izy ireo. Tonga dia nampiasain’ny Barea avy hatrany ireo nandritra ny fana- zaran-tenany teny Andralanitra. Mbola nanamafy ny firaisam- po tamin’ireo mpitia baolina kitra malagasy izay tonga maro tetsy Mahamasina izy ireo, omaly tolakandro.